गसिप - साप्ताहिक
सारा सिर्पाइली केही समयअघि अनमोल केसीसँगको प्रेम सम्बन्धमा छिन् भन्ने कुराले चर्चामा आएकी थिइन् । अनमोलले उक्त कुरा अस्वीकार गरेपछि अहिले त्यसको चर्चा हुन छाडेको छ । यद्यपि साराको गतिविधि हेर्ने हो भने उनी कसैको प्रेममा छिन् भन्ने छनक मिल्छ । पुरा पढ्नुहोस्
नेपालमा बुधबारनै बलिउड चलचित्र ‘भारत’ प्रदर्शन भयो । यसअघि चलचित्र ‘कलंक’ प्रदर्शनमा रोक लगाएको बिकास वोर्डले समेत यो चलचित्र रोक्न सकेन । खासगरी शुक्रवार बाहेक अन्य दिन बाहिरका चलचित्र प्रदर्शनमा रोक लगाउने बोर्डको अडानलाई अदालतले हावा खुवाइदियो । यससँगै अब बलिउड हलिउड चलचित्र जुनसुकै दिन प्रदर्शनमा आउन मिल्ने संकेत दिएर अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनयमा खासै जम्न नसकेकी पुर्व मिस नेपाल मलिना जोशी अहिले थाइल्याण्डमा छिन्, प्रेमीसँग । उनको साथमा छन्, जिम ट्रेनर सुशान्त प्रधान । केहि दिनअघि थाइल्याण्ड गएका उनिहरुले खुलेरै मस्ति गरिरहेको देखिएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
मिस नेपाल भइसकेपछि धेरैले उनिहरुलाई सोध्ने एउटा प्रश्न हो, अभिनय क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने कि नगर्ने ? यसपटक मिस नेपालको ताज पहिरिएकी अनुष्का श्रेष्ठ पनि सोहि प्रश्नको सामना गर्नुप–यो । अनुष्का भने भविष्यमा अभिनय क्षेत्रमा जाने सम्भाबना निकै न्युन रहेको संकेत गरेकी छिन् । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , वैशाख २९, २०७६
अभिनेत्री रेखा थापासँग तेस्रो बैबाहिक सम्बन्ध टुंग्याएपछि एक्लो जीवन विताइरहेका निर्माता छविराज ओझाले अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलसँग बिबाह भएको स्विकार गरेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
चर्चित चलचित्र निर्माता छविराज ओझाले शिल्पा पोखरेलसँग बिहे भएको खुलासा भएको छ । लामो समयदेखी प्रेममा रहेका उनिहरु केहि बर्षदेखी लिभ इन टुगेदरमा थिए । अन्ततः निर्माता छविराज ओझा आफैले बिहे भएको छनक दिनेगरी तस्विर र क्याप्सन राखेका छन् । पुरा पढ्नुहोस्
केकी अधिकारी अन्य प्रोजेक्टको पत्रकार सम्मेलनमा जस्तो निराश देखिइनन् । आफुतर्फ सोझिएका क्यामेरामा मुस्कानका साथ तस्विर खिचाइरहेकी थिइन्, बोल्दा निर्धक्क । प्रशंग चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’ को घोषणा कार्यक्रमको हो । पुरा पढ्नुहोस्
निकितालाई त्यतिबेला गरिएको प्रश्न थियो, किन तुरुन्तै फर्कनुभयो ? उनले भनिन्, ‘चलचित्र सुटिङ रोकिएको छ, खै के भैरहेको थाहा भएन ।’ मिस नेपाल भएपछि पहिलोपटक चलचित्रमा काम सुरु गरेकी निकिताको संकेत खासै ठिक थिएन । उनले काम गर्ने भनिएको पहिलो चलचित्र थियो, रानीमहल । पुरा पढ्नुहोस्
अभिनेत्री रेखा थापाको परिचय त अब दिइराख्नु परेन । झण्डैं २० बर्षअघि नेपाली चलचित्र उद्योगमा छिरेकी यि अभिनेत्री पछिल्लो समय राजनितीमा पनि सक्रिय छिन् । केहि बर्षअघि राप्रपाको केन्द्रिय सदस्यमा राम्रै मतका साथ बिजयी भएकी थापा अहिले कुन पार्टिमा छिन् ? कसैलाई पत्तो छैन । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , चैत्र ११, २०७५
युगन्त प्रताप राणा केहिबर्षदेखी बिजनेसमा ब्यस्त थिए । सानैदेखीको रहर भने मोडलिङ थियो । उनि केहिबर्षदेखी मोडलिङमा सक्रिय रहे । विभिन्न विज्ञापनमा काम गरे । म्युजिक भिडियोमा देखिए । ¥याम्पवाकमा भेटिए । अब उनलाई चलचित्रमा देख्न पाइने भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , पुस ६, २०७५
मिडियाको नजरमा सकेसम्म नपर्न उनीहरूले अन्तिममा एउटा उपाय रचें, देवांश गाडी लिएर एक्लै कार्यक्रमबाट निस्किए, साम्राज्ञी साथीको स्कुटरमा फर्किन् । देवांश गौरीधारामा साम्राज्ञीकै प्रतीक्षामा बसेका थिए । पुरा पढ्नुहोस्